भेटियो माधव नेपाल सिधै जेल पुग्ने प्रमाण – Paluwa Khabar
जेठ २८, २०७८ शुक्रबार 29
काठमाडौं, जेठ २७ । सर्वाेच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने बिषयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय मगाएपछि तात्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सिधै जेल पुग्ने निश्चित देखिएको छ ।
अदालतले निर्णय गर्नुअघि मन्त्रिपरिषदको निर्णय मागाएपछि जनताटाइम्सले तात्कालिन निर्णय बिश्लेषण गर्दा ललितानिवास प्रकरणमा निर्णय गराउन तात्कालिन प्रधानमन्त्री नपाल नै सवैभन्दा बढी सक्रिय रहेको र उहाँकै निर्देशनमा सो निर्णय गरी सरकारी जग्गा ब्यक्तिलाई दिलाएको तथ्य फेला परेको हो ।
नेपालले सम्बन्ध नै नरहेको मन्त्रालयलाई समेत प्रयोग गरी ललितानिवासको जग्गा भूमाफियालाई दिलाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुभएको पाइएको हो । ललितानिवास प्रकरणमा नेपाल नेतृत्वको सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीले आफूहरुलाई जानकारी नभएको र मन्त्रिपरिषदमा छलफल पनि नभएको तथ्य यसअघि नै खोलिसक्नु भएको छ ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले अनुसन्धानको क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा बदनीयतपुवर्क निर्णय गरी सरकारले भूमाफिया पोसेको निश्कर्ष निकालेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गराउनु भएको छ भने अख्तियारले नेपाल नेतृत्वको सरकारका दुई मन्त्रीलाई बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । तथ्य र प्रमाणहरुले ललितानिवास प्रकरणमा सवैभन्दा बदमासी नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको देखाएको छ ।
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबाट २०६६ चैत १९ मा स्वीकृत प्रस्ताव गयो ।
सो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो, ‘सरकारी जग्गामा मोही भए÷नभएको, भए केकति छन ? सो को यकिन गर्न निर्देशन प्राप्त भएबमोजिम सरकारी जग्गामा रहेका मोहीहरूको लगत तयार गरिएको र सम्बन्धित जग्गाधनीहरूसँग समेत छलफल गरी मोही लगत कट्टा गरी खुद सरकारी जग्गा यकिन गरी पेस गर्न प्राप्त निर्देशनका आधारमा …विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशनसमेतका आधारमा… सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा देहायबमोजिम हुन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने :
तात्कालिन मन्त्रीहरुको साविती बयान र मन्त्रिपरिषदमा आएको प्रस्ताव तथा लेखिएको निर्णयबाटै ललितानिवास प्रकरणमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री माधावकुमार नेपालकै मुख्य दोषी रहेको देखिन्छ । सर्वाेच्च अदालतले सो मुद्दामा निर्णय मगाउने आदेश भएसँग अव नेपालबिरुद्ध मुद्दा चलाउने प्रमाण देखिन्छ । नेपालबिरुद्ध मुद्दा चलाउन आदेश भएको अवस्थामा उहाँ सोझै जेल पुग्ने निश्चित छ । अख्तियारले शक्तिको आडमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालबिरुद्ध मुद्दा नचलाएको भन्दै छानविन गरी कार्वाहीको मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भई हाल बिचाराधीन रहेको छ । जनताटाइम्सलाई प्राप्त तथ्यहरुले नेता नेपाल बालुवाटार प्रकरणमा प्रमुख दोषी रहेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमै ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार…’ भन्ने शब्द पटक पटक उल्लेख भएबाटै मन्त्रीहरु उहाँको दवावमा प्रस्ताव ल्याउन बाध्य भएको देखिन्छ ।
Prevभर्खरै आयो सारा देशवासीलाई अत्यन्तै खुसीको खबर।
NextNepal vs australia live
यति गते SEE को नतिजा सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको घोषणा, हेर्नुहोस् नतिजा प्रकाशन हुने समय? (विज्ञप्ति सहित)
यमराज बन्दै टिपर : बाटामा हिडिरहेकी १८ वर्षीय अन्सुको निधन, मनमा मायाँ भए पूरा पढेर RIP लेख्नु होला !
माधव नेपाल प’क्राउ पर्ने , प्रमाण यस्तो छ
भर्खरै बिमान दु’ र्घटना हुँदा प्रधानमन्त्री सहित ११ जनाको मु’ त्यु , मनमा माया भए RIP लेख्नुहोला (238)
पर्यटनमन्त्रीमा प्रेम आले (225)